Ozi 5 maka November. Womenmụ nwanyị ojii, ihe egwuregwu na akụkọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ozi 5 maka November. Womenmụ nwanyị ojii, ndị na-atọ ọchị na akụkọ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | akụkọ sayensị emeghị eme, Egwuregwu, Akwụkwọ, Black akwụkwọ, Akụkọ
November. Nke a bụ nhọrọ m nke akwukwo 5 nke akwukwo oji, ihe omimi (ma ọ bụ na-atọ ọchị) na akụkọ nwere aha dika Carlos Ruiz Zafón, María Frisa, Frank Herbert, Juan Gómez-Jurado na Jo Nesbø.
1 Ududo akwu - María Frisa
2 White King - Juan Gómez-Jurado
3 Ọbara Anyanwụ - Jo Nesbø
4 Obodo uzuoku - Carlos Ruiz Zafón
Ududo akwu - Maria Frisa
5 maka November
A Maria Frisa Enwere m obi ụtọ gbaa ya ajụjụ ọnụ afọ ole na ole gara aga na mmalite nke akwụkwọ edemede ya Na-elekọta m. Ugbu a laghachi na aha ọhụrụ a. Kpakpando ya Katy, nne na-enweghị ọrụ nke ya na nwa ya nwanyị bi na Madrid bi n'ụlọ okomoko nke ha ga-esi banye n'otu obere ụlọ. N’oge na-adịghị anya a kpọrọ Katy ka o nye ihe dị ka ọrụ nrọ na na uda nke chioma na m chọrọ. Ma ihe na-eme bụ na emehie Site na mgbe gara aga igosipụta ma kpalite ihe nro kacha njọ ị pụrụ iche n'echiche.
Onye ocha - Juan Gómez-Jurado
Aha na-emechi ihe omuma starring otu n'ime ndị na-adịbeghị anya, ọzọ sui generis ma na-ewu ewu heroines nke ojii, Antonia scott. Ọ bụkwa otu n'ime ihe nchịkọta akụkọ kachasị na-adịbeghị anya. Na nke a Onye ocha anyị nwere ozi omimi: «Enwere m olileanya na ịchefubeghị banyere m. Ka egwuo egwu?". Ọ bụ nke Antonia Scott na-anabata, onye maara nke ọma onye zigara ya ya makwaara na egwuregwu a fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume imeri. Mana ọ tụgharịrị na ọ naghị achọ ida, n'agbanyeghị na eziokwu ejidela ya mgbe ọ gbara ọsọ ogologo oge.
Ọbara ọbara - Jo Nesbø
Ọ bụrụ na m ga-echekwa ihe ọ bụla site na afọ ọdachi a, ọ bụ na akwụkwọ abụọ nke Jo Nesbø ka ga-ebipụta. Ọ bụghị ajụjụ nke ime mkpesa, na onye edemede Norwegian ahụ maara anyị nke ọma na nkezi nke afọ abụọ n'etiti akwụkwọ na akwụkwọ. Ma ọ bụrụ na ọ kpakpando na ha Harry oghere, ha na-eme ya ugbu a Ndị Norway na-eti ihe, ka ha siri hụ na eme ha baptism ebe a saga a bidoro na Mee na Ọbara na snow.
Agụọla m nke a ogologo oge gara aga Ọbara ọbara, aha aka ike na nke mbụ N'etiti abalị Sun. Ọ bụ ihe ọzọ obere akwụkwọ a na-agụ ya ozugbo na kpakpando Jon hansen, onye otiti nke raara ya nye Onye na-akụ azụ (nke pụtararịrị na Ọbara na snow), otu n'ime azụ abụba ahaziri mpụ Oslo.
Ya mere, ọ na-etinye ala n'etiti na ọ dịghị ihe dị mma karịa ịga na-emetụ Arctic Circle. Do enye osobo Lea, ada onye isi okpukpe nke otu obodo ime di ocha di ocha na nwa gị nwoke, onye ị ga-emesị bụrụ enyi karịa ọbụbụenyi. Ma, n'ezie, El Pescador anọgideghị na ogwe aka ya gafere.
Obodo uzuoku - Carlos Ruiz Zafon
Na sobtaitel nke Akụkọ niile, Ruiz Zafón tụụrụ ime ọrụ a dị ka a mara ndị na-agụ akwụkwọ gị site na saga malitere Onyunyo ifufe. O di nwute na afo a ojoo na oria kansa ha were onye edemede.
Akụkọ ndị a na-agụ akụkọ a Ihọd kedu ihe ị kpebiri ime onye edemede achọpụta na akụkọ ndị ọ na - eme na - enyere ya aka ịkpalite mmasị nke nwa agbọghọ ahụ bara ọgaranya ọ hụrụ n'anya; a onye nhazi na-agba ọsọ na Constantinople nwere atụmatụ maka ọbá akwụkwọ a na-agaghị emeri emeri; Onye bịara abịa caballero na-anwa Cervantes dee akwukwo puru iche. Na Gaudi, onye, ​​na-aga njem njem omimi na New York, na-etinye onwe ya dum n'inwe anụrị na uzuoku, ihe ndị e kwesiri ka obodo mee.
akwa - Frank Herbert
Brian herbert, bụ nwa na onye nketa Frank Herbert kwuru, agbanweela akụkọ mgbe ochie nna ya dere. akwa E bipụtara ya na 1965 ma bụrụ ezigbo ihe ịga nke ọma n'oge ahụ, na-enweta akara ngosi Hugo dị egwu n'afọ na-eso ya. Ọ na-eme ya na-esote Kevin J Anderson o gosiputara ya site na di na nwunye nke Valladolid illustrators: Raul Allén y Patricia martin.
A ga-ebipụta mmegharị ahụ na mpịakọta atọ ma ugbu a nke mbụ na-abịa, nke dakọtara na mmalite nke mmegharị ihe nkiri nke ọ duziri. Dennis Villeneuve.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » Ozi 5 maka November. Womenmụ nwanyị ojii, ndị na-atọ ọchị na akụkọ
Ekwadoro m akwụkwọ oji na aghụghọ. Usoro Blixen.
Kpamkpam na-eri ahụ. Gaghị akwụsị ịgụ ya. Ọ bụ agile na ọgụgụ isi. Odee ya gbawara
Zaghachi Maria jose
Obi obi nke uwa
Anya mmiri Shiva